समर्पित गुरु र विवेकी चेलाको खडेरी | NepalDut
समर्पित गुरु र विवेकी चेलाको खडेरी
असार ३१ गते २०७६
आज गुरुपूर्णिमा अर्थात आषाढशुक्ल पूर्णिमा हो । व्यास ऋषिलाई गुरुजनका प्रतीकका रुपमा मान्ने गरिएको छ । पराशरका पुत्र कृष्ण दैपायन व्यास ऋषिको जन्मदिन अर्थात आषाढ शुक्ल पूर्णिमालाई नै गुरु पूर्णिमााका रुपमा मनाउने गरेको पाइन्छ । आजका दिन आफूलाई शिक्षादीक्षा दिने गुरुलाई आदार–सत्कार स्वरुप मानिने पुजिने र मीठामीठा खानेकुरा दिएर मनाउने गरिएको छ ।
भारतमा त कतिपय शिक्षकले त गुरुपूर्णिमालाई नै व्यास पूर्णिमा मानी यसै दिनदेखि नै नयाँ शैक्षिक शत्र शुभारम्भ गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । ‘गु’ को अर्थ अन्धकार हो भने ‘रु’ भनेको नास गर्नु । अज्ञानरुपी अन्धकारलाई ज्ञानरुपी शिक्षाको ज्योतिले नास गरी उज्यालो फैल्याउने हुँदा गुरुको महत्व परापूर्वकालदेखि नै दर्शाइएको छ । ज्ञान विनाको भौतिक शरीर काठ, ढुंगा, माटोको डल्लोसरह हो । आमाबाबुको संयोगबाट उत्पति भएको एउटा शिशु (मानव) को शरीरमा ज्ञानको विजारोपणपश्चात मात्र उसको ज्ञानमय शरीरको पुनर्जन्म हुन्छ । तिनै ज्ञान दिने व्यक्तिलाई गुरु भन्ने गरिएको छ ।
कतिपयका शब्दमा मानवलाई गुरु शिक्षापश्चात् पुनर्जन्म भएको मान्ने गरिएको छ । भनिन्छ, आमाबाबुबाट प्राप्त भौतिक शरीर नष्ट हुन्छ तर गुरुबाट ज्ञान प्राप्त ज्ञानमय शरीर अमर हुन्छ । गुरु र शिष्यको बीचमा अटुट सम्बन्ध विकास भएको हुन्छ । मानिस जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त जहिले पनि विद्यार्थी नै रहन्छ । भनिन्छ, जीवन सिकाइ र भोगाइ हो । मान्छेले जतिसुकै एउटा कुनै विषयमा निपुर्ण होला तर सबै विषयमा निपूर्ण पाउन दुर्लभ छ । शास्त्रमा भनिएको छ, ‘गुरुब्रम्हा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर ः गुरु साक्षात परंब्रम्ह तस्मै श्री गुरुवे नमः।’ ब्रम्हा विष्णु महेश्वर जे भने पनि गुरु नै हुन् साक्षात परब्रम्ह पनि गुरु नै हुन् । महाभारतका अनुसार गुरुजन भनेर व्यापक अर्थ छ । गुरुजन भन्नाले अध्यापन गराउने अध्यापकका अतिरिक्त अन्य मान्यजन जस्तै माता, पिता, पितामह आदि पनि पर्छन् । गुरु वर्गले नै ज्ञानमार्गमा अग्रसर गराउँछन् । मन, वचन, शरीर, वाणी, इन्द्रिय तथा बुद्धिलाई नियन्त्रण गरेर शिष्यले गुरुबाट शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ, गुरु सेवाबाट विमुख हुनु हुँदैन ।
अहंकार र अभिमान त्याग गरी गुरु आज्ञापालन गर्नु नै छात्राको परम कर्तव्य हो । गुरुले पनि आफ्ना शिष्यप्रति माया, ममता देखाउने एवं पुत्रवत व्यहार गर्नुपर्छ । गुरु हुनलाई स्कुल, कलेजमा गएर पढाएर औपचारिक शिक्षा नै दिनुपर्छ भन्ने छैन । जो कोहीलाई पनि कसैले केही ज्ञान दिन्छ भने त्यसलाई त्यसले गुरुको रुपमा मान्नुपर्दछ । ज्ञानगुनका कुरा जोसँग पनि सिक्न सकिन्छ । भनिन्छ, मानिस जस्तो संस्कारमा हुर्कियो, मानिसले त्यस्तै सिक्छ । घरमा बाबुआमालाई आदर गर्न सिकेका बच्चा भए स्कुलमा गएर शिक्षकलाई आदर भाव राख्छन् । अन्यथा घरमा बाबुआमालाई नै मुक्का ताक्ने छोराले स्कुलमा गएर शिक्षा दिने गुरुलाई कसरी आदर गरोस् ? हिजोआजका विद्यार्थीले शिक्षक भनेको आफूले तिरेको शुल्कबाट तलब खाने कर्मचारी हो भन्नेमात्र बुझेका छन् । यो गलत संस्कारका कारणले भएको हो ।
हिजोआजका विद्यार्थीले शिक्षकलाई आफूले तिरेको शुल्कबाट तलब खाने कर्मचारी भन्ने बुझेका छन् भने शिक्षकमा पनि विद्यार्थी र ज्ञानप्रतिको समर्पण कम हुँदै गएको छ ।
वास्तवमा एउटा गुरुले दिएको शिक्षाको कुनै मोल हुँदैन । शिक्षकले विद्यार्थी पढाएवापत आफ्नो र परिवारको गुजारा धान्नको निम्ति केहि पारिश्रमिक लिनुपर्दछ । त्यसो त गुरुकुलमा पनि दक्षिणाको चलन थियो । त्यतिखेर गुरुलगायत गुरुआमालाई समेत पुग्ने गरी दाल, चामल, घिउ, नून आदि दिइन्थ्यो । त्यतिखेरका विद्यार्थीले कहिल्यै गुरुलाई तलवदार कहिल्यै सम्झेनन त । गुरु र चेलाको सम्वन्ध भनेको नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्दछ, नदी र पुल जस्तो हुनुपर्दछ, माझी र बटुवा जस्तो हुनुपर्दछ, बावु र छोराको जस्तो हुनुपर्दछ । गुरुलाइ अप्ठ्यारो पर्दा विद्यार्थीले सहयोग गर्नुपर्दछ, विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पर्दा गुरुले सहयोग गर्नुपर्दछ ।
विद्यार्थीले आफ्ना गुरुप्रति गर्व गर्नुपर्छ । गुरुले आफ्नो शिष्य अर्थात् विद्यार्थीप्रति गौरव गर्नुपर्दछ । वास्तविक गुरु र चेलाबीच हुनुपर्ने सम्बन्ध यस्तो हो । तर अफशोच हिजोआज गुरु र चेलाबीच पहिला जस्तो न सुमधुर सम्बन्ध नै छ, न अटल विश्वास नै छ । हिजोआज त यी २ वर्ग आपसमा विपरीत वर्ग जस्तै देखिएका छन् । विद्यार्थी फेल हुँदा पनि विद्यार्थीले गुरुमाथि हातपात गर्ने गरेका छन् । पहिला पहिला जस्तो गुरु र विद्यार्थीबीचको घनिष्ठता र आत्मीयता विरलै देख्न पाइन्छ । यसका लागि जिम्मेवार पक्ष पनि दुवै हुन् । गुरुहरू पनि हिजोआज विद्यार्थीका बारेमा त्यति चिन्तित देखिन्नन् । गुरुहरू पैसाको पछि पछि लाग्दै ज्ञानलाई पैसामा मात्र तुलना गर्न लागेका छन् भने विद्यार्थीचाहि बढी भौतिकवाद भई गुरु र ज्ञानको वास्तविक महत्व नबुझी गुरुलाई अवहेलना गरिरहेका छन् ।
गुरुपूर्णिमाको सन्देश भनेको गुरु र शिष्यबीच बढ्दै गएको दूरीलाई कम गरी सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु हो । अब मानवताको शिक्षा कति पाए भन्ने कुरा खोतल्ने बेला भएको छ । वर्तमानका विद्यार्थीको गुरुप्रति सकारात्मक धारणा बनाउने बेला भएको छ । वर्तमानको शिक्षा प्रणालीमै खरावी रहेकाले विद्यार्थी वर्ग उश्रृङ्खलतातर्फ उन्मुख भएको पो हो कि ? यसतर्फ पनि ध्यान दिएर सोच्न आवश्यक छ । यसतर्फ सोच्दै विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकले आआफ्नो कर्तव्य र भूमिका निर्वाह गर्रौं । यस वर्षको गुरुपूर्णिमाले हामी सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्न गरोस्, सम्पूर्ण गुरुप्रति हार्दिक नमन ।